Midowga Yurub oo Soomaaliya ku taageeraya ku dhaqaaw 100 milyan oo lagu kobcinayo dhaqaalaha - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)-Midowga Yurub ayaa daaha ka rogay in ay bilaabayaan barnaamij ay ku bixin doonto lacag dhan 94 milyan oo doollar kaasoo lagu xoojinayo koboca dhaqaalaha Soomaaliya.
Fulgencio Garrido Ruiz oo ah madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo war qoraal ah soo saaray arbacadii ayaa sheegay in danta laga leeyahay barnaamijkan uu yahay gacan siinta iyo kobcinta dhaqaale dhamaystiran oo ay Soomaaliya yeelato kaasoo ka qeyb qaadanaya xasilloonida dalka.
“Barnaamijkan waxa uu qeyb ka yahay kabka miisaniyadda dalka iyo hirgalinta iskaashi istiraatiiji ah oo ay wadaagaan Soomaaliya iyo Midowga Yurub iyada oo laga duulayo kordhinta awoodaha hay’ahada dowladda iyo bixinta adeegyada”ayuu yiri Fulgencio, “Barnaamijkan waa mid la jaanqadaya kuna habboon baahiyaha siyaasadeed, dhaqaale, iyo bulsho ee ka jira deegaannada laga fulin doono” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Wasiirka wasaaradda Qorsheynta iyo maalgashiga oo arrinkan soo dhaweeyay ayaa yiri “Waan bogaadinayaa barnaamijkan oo mustaqbal wanaagsan u horseedaya Soomaaliya xoojinayana maalgashiga iyo xariirka dhaqaale ee aan la leennahay Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa muddo fog Soomaaliya ka taageerayay dhinacya badan oo xagga horumarinta ah.